Ny Baolina Kitra An’i Brezila, Ny Kok-Boru An’i Kyrgyzstan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Oktobra 2016 4:59 GMT
Sary: Erlan Bakirov.
Noho ny ekipam-pireneny efa nandresy tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany tsy latsaka ny indimy izao, dia zary zatra mieritreritra ny amboara manan-danja indrindra amin'ny baolina kitra ho toy ny fananany manokana i Brezila, tsindraindray izy no mampindrana izany ho an'ny firenen-kafa toa an'i Alemaina, Frantsa, Espaina, ary Italia.
Fa misy firenena iray hafa mampihatra fanjakazakana tanteraka amin'ny fanatanjahan-tena iray filalaon'olo-tokana: ny Repoblikan'i Kyrgyzstan Firaisana Sovietika teo aloha, izay mpitarika amin'ny sehatry ny Kok-Boru iraisampirenena nandritra ny taona maro.
Lalaovina amin'ny trakitrakin-taolan'osy ny Kok-Boru ary matetika no heverina ho mitovy filalaovana amin'ny lalao polo. Nandritra ny Mondialin'ny Lalaon'ny Mpirenireny 2016 [mg] noraisin'i Kyrgyzstan, mondialy ahitana ihany koa lalao fitaingenan-tsoavaly, no niatrehan'ny mpampiantrano ny mafy indrindra hatramin'izao raha niatrika ny ekipam-pirenen'i Kazakhstan, firenena iray hafa manana ny fitaingenan-tsoavaly ho lalao nentim-paharazana.
Ekipa nasionaly Kok-Boru ao Kyrgyzstan. Nozarain'ny federasiona Kyrgyz Kok-Boru tao amin'ny Facebook.
Tsy nandefa ekipa tany amin'ny andian-dalaon'ny taona 2014 [mg] i Kazakhstan, izay nahitana ekipan'i Kyrgyzstan A sy B nanintsana tsy nisy ahiahy ireo ekipa avy any amin'ny firenena toa an'i Shina, ny repoblika Rosiana Altai ary Tajikistan izy ireo ka niafara tamin'ny fifanandrinan'ny ekipa roa tonta tamin'ny famaranana. (Ny ekipa A no nandresy).
Tsy araka ny nanampoizana azy ho mora anefa izany tamin'ity taona 2016 ity.
Tsy sarotra ny fifaninanana natolotry ny Kazakhs ho an'ny ekipa Kyrgyz tamin'ny farany teo: nandrava ny mpifanolobodirindrina aminy manankarena amin'ny solika tamin'ny isa 15 no 3 ny Kyrgyzstan izay milaza ny fandreseny tamin'ny fifaninanana nahitana azy ireo ihany koa nanapotika ekipa tsy matihanina iray avy any Etazonia.
Ny Kok-Boru no Iray amin'ireo fanatanjahan-tena mihoatra ny 20 fanta-daza indrindra izay nolovaina avy amin'ny vahoaka Tiorkika mpirenireny manerana an'i Eorazia ka nasongadina ao anatin'ny lalao, izay ahitana firenena mpandray anjara maherin'ny 40. Fanindroany izao i Kyrgyzstan no nampiantrano ny fifaninanana izay atao isaky ny roa taona, Torkia no hampiantrano ny lalao manaraka amin'ny taona 2018.
Dingana mankany amin'ny fahamatorana
Malaza eo amin'ireo vahoaka Tiorkika mpifindrafindra monina fahiny ny Kok-Boru, indrindra fa amin'ny Kyrgyz sy ny vondrom-poko Tiorkika mipetraka any Afghanistan, izay manonona ny lalao hoe Buzkashi.
Lazaina matetika fa mianatra mitaingina soavaly ny ankizy Kyrgyz vao afaka mandeha ary heverina ho dingana mankany amin'ny fahamatorana ny filalaovan'ny zazalahy Kok-Boru voalohany any amin'ireo vohitra kely ao amin'ny firenena.
Mitaky tanjaka ara-batana avo lenta ny lalao sy fahaizana voajanahary miaro vatana , satria mety ho mafy ny ratra sy mety hahafaty mihitsy aza mandritra ny lalao. Manao fanazaran-tena mandritra ny fotoana maharitra ny mpilalao tena za-draharaha mba ho afaka hanao ny tolona sarotra eny ambony soavaly sady mifaninana mba hisambotra ny trakitrakin-taolan'osy izay “amboara”-n'ny lalao mandritra izany fotoana izany. Tsy afaka hilaza ny tenany ho zhigit, izay mitovitovy amin'ny hoe “lehilahy manan-talenta sy be herim-po” raha adika amin'ny teny Kyrgyz, ny zazalahy izay tsy mahay mitaingin-tsoavaly ka tsy afaka mifaninana amin'ny lalao toy ny Kok-Boru sy Er Enish ( tolona eny ampitaingenan-tsoavaly ) .
Zazalahy mitaingin-tsoavaly. Sary: Erlan Bakirov.
Rehareha sy loka
Tsy ny osy rehetra akory dia ampy anaovana fifaninanana Kok-Boru . Matetika misy ny iraka mizaha ny osy natokana ho amin'izany eny amin'ny tsenam-biby fiompy mba hifidy ny osy milanja 35 ka hatramin'ny 40 kilao. Ny trakitrakin-taolan'osy mavesatra kokoa dia midika ho loka tsara kokoa ho an'ny mpilalao, izay mifaninana amin'ny sehatra matihanina ao anatin'ny ekipa roa misy mpitaingin-tsoavaly roa ambin'ny folo fa saingy manao fanazaran-tena amin'ny isa kely na betsaka kokoa .
Lahatsarin'ny lalao rahavavin'ny Kok-Boru iray antsoina hoe – Ulak Tartysh – ao amin'ny tanànakely Jany-Turmush any amin'ny faritra atsimon'i Kyrgyzstan. Nalain'i Erlan Bakirov sary .
Raha atao amin'ny vanin-taona mafana ny Lalao Iraisampirenena ho an'ny Mpirenireny, dia matetika atao ny volana Novambra ka hatramin'ny Febroary ny vanim-potoan'ny Kok-Boru. Fa ho an'ny ny lalao avo lenta kosa dia tanterahina ny volana mangatsiaka kokoa izy ary didin'ny mpitarika ny lalao eo amin'ny 10 sentimetatra eo ambanin'ny kibon'ilay osy, esoriny ny taovan'ilay biby ka aleviny ao anaty oram-panala mandritra ny ora roa ny fatiny, mba tsy Hahasimba azy. Avy eo zairin'izy ireo amin'ny alàlan'ny tady ny tataka.
Mihazona ny fifaninanana Kok-Boru ireo olom-pirenena Kyrgyz noho ny antony samy hafa, toy ny fankalazana ny fetim-pirenena, ny fahaterahan'ny zaza na ny mariazy. Indraindray manana mpanohana ara-bola manankarena ny lalao ka mahazo loka fiara na vola an'aliny dolara ireo mpilalao mandresy .
Lahatsarin'ny lalao Kok-Boru ao an-tanànakelin'i Jany-Turmush ao amin'ny faritra atsimon'i Kyrgyzstan. Azo lazaina fa tsotra ny loka amin'ity lalao ity: karipetra sy ondry .
Fa ho an'i Chinghiz, azo sary etsy ambany, loharanom-bola ara-toekarena lehibe ny Kok-Boru. Mahazo fiara manodidina ny telo isan-taona eo izy, ary mahazo vola 2.500 ka hatramin'ny 3.000 $ ao anatin'ny taom-pilalaovana iray, arakaraka ny ekipa izay hilalaovany mba hanaporofoany ny fahombiazany.
Aorian'ny lalao niadiana mafy ny fety. Marina izany, matetika ireo mpilalao Kok-Boru—nefa tsy voatery ho izay foana—no mihinana ny osy nifaninanana. Nanazava ny mpilalao iray izay niresaka tamin'ny Global Voices nanaovana ity lahatsoratra ity: “Mandritra ny lalao, misintona ny osy ny ulakchi (mpilalao), ary hitsakitsahan'ny soavaly ny trakitrakin-taolany. Mampalemy ny hena izany. Malemy tsara ao am-bava ilay izy [Rehefa masaka]. “